Umzila odlula eRías Baixas, uhambo lwe-oenological | Izikebhe ze-Absolut
Umzila odlula eRías Baixas, uhambo lwe-oenological
Ungacabanga uhamba ngesikebhe esikebheni somkhumbi, unamathafa amahle futhi uphakathi kwesinye sezindawo zokudlela ezihamba phambili zaseSpain, ukunambitha ukudla kwasolwandle newayini elimnandi ... ngoba akukho okuningi ongakucabanga futhi ukuthi ukuhamba ngesikebhe ngeGalician Rías Baixas ingakunika konke lokhu
Isiphakamiso sethu ukuthi wazi indlela ozohamba ngayo, ngokusebenzisa iziziba zeVigo, iPontevedra ne-Arousa, zosuku olulodwa noma eziningana ngalezi zindawo.
Okwamanje ngikunikeza olunye lwezinto ezihlongozwayo, kepha ngiyazi ukuthi kule ndatshana uzophenya okuningi. Lolu hambo seluvele luyatholakala, futhi lusebenza kuze kube ngu-Okthoba 15 uma kuvalwa isizini.
Ngizoqala nge Umzila Amagugu asezizalweni zemifula, ahlala izinsuku ezintathu. Uhambo luqala ethekwini laseVigo futhi isitobhi sokuqala sisesiqhingini saseSan Simón. Ubusuku bokuqala ulala eBaiona, bese kuthi lapho evuka aye eCíes Island, National Park. Njengoba kuyindawo yokulondolozwa kwemvelo, inani labantu abakwazi ukuyifinyelela lilinganiselwe, ukuze imvelo ingonakali.
Ukusuka eziqhingini zaseCíes, ungangena ngqo kumzila we-Albariño neCamellia, uvakashele izindawo zaseSanxenxo, O Grove, Ons Islands, nase-Illa de Arousa, uze ufike eVillagarcía.
Bese kuba nenketho i-Islas Atlánticas neVillas Marineras, ehlala usuku olulodwa, uhlelo lwayo luyahlukahluka kuye ngosuku lwesonto. Imizila yansuku zonke ngaphandle koMsombuluko, futhi iqala ngehora leshumi ekuseni kuze kube yihora lesihlanu ntambama, cishe. Uma ukhetha umzila onqamula iRía de Vigo, uzoba nethuba lokuhamba phakathi kwezihlenga zezimbaza bese uzama lokhu kudla okumnandi kwesiGalician esikebheni esifanayo esifinyelela kuwo wonke amagumbi omhlaba.
Lezi yiziphakamiso nemizila embalwa, emachwebeni eRías Baixas uzothola abanye. Yebo, ngiyakutshela ukuthi zonke izinkampani zinegunya le-Xunta de Galicia futhi zigcina i- inhlonipho ephezulu ngemvelo yayo, yingakho imizila eminingi yenziwa ngamakhumbi e-catamaran noma e-seiling.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » Izinhlobo zokuhamba ngesikebhe » Ukuhamba ngezinyawo okuncane » Umzila odlula eRías Baixas, uhambo lwe-oenological
ISanta Cruz izoba itheku lesisekelo le-TUI Discovery 2
INdlovukazi uMary 2 inweba indawo yayo ngezilwane ezifuywayo